I-US Right To Know FOIAs Profs Who Wrote for GMO PR Website - Ilungelo Lokwazi I-US
I-US Right To Know FOIAs Profs Who Wrote for GMO PR Website
Posted on February 11, 2015 by UGary Ruskin
Ukukhishwa Ngokushesha: NgoLwesithathu, Februwari 11, 2015
I-US Right to Know yafaka amarekhodi asesidlangalaleni amasonto amabili edlule okucela izincwadi kanye nama-imeyili kuya nakubaprofesa emanyuvesi kawonkewonke ababhalele iwebhusayithi ye-PR yezimboni zezolimo, i-GMO Answers [noma umkhankaso wayo wokulwa nokubhalwa kwe-GMO eCalifornia. Kuchitshiyelwe 2/13] Iwebhusayithi ye-GMO Answers yadalwa nguKetchum, inkampani yezobudlelwano nomphakathi nayo imele iRussia kanye nalo Umongameli, UVladimir Putin.
Izicelo zombuso zeFreedom of Information Act ziyimizamo yokuqonda amandla aphakathi kwemizamo ye-PR yezimboni zezolimo, kanye nekhono leyunivesithi yomphakathi kwesinye isikhathi ebhekiswa emphakathini.
"Thina bakhokhi bentela kufanele sazi imininingwane yokuthi abasebenzi bethu abakhokhela intela babhekela nini izinkampani ezizimele nezinkampani zabo ezingama-PR," kusho uGary Ruskin, umqondisi omkhulu we-US Right to Know. "Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma besebenzela izinhlangano ezingaziphathi kahle njengeKetchum, nokuyinto ethintekayo ebusosheni obuphikisana nezinhlangano ezingenzi nzuzo."
Ngokusho kombiko wophenyo kaJames Ridgeway we umama Jones, ngo-2000, uKetchum wayexhunyaniswe ne- umzamo wobunhloli obumelene nezinhlangano ezingenzi nzuzo eziphathelene nama-GMO, kufaka phakathi Isikhungo Sokuphepha Kokudla Nabangane Bomhlaba. Ehlazweni elihlobene, uKetchum naye okuhlosiwe Greenpeace nge i-espionage.
Kuvidiyo esanda kususwa kwi-Intanethi, UKetchum uziqhayisa ngempumelelo yakhe ekuphambukeni abezindaba ukuze athole ukusakazwa okuhle ngama-GMO, futhi wavuma, "siyibhekisisa kahle ingxoxo" kuma-akhawunti wezokuxhumana nabantu be-GMO abagxeki.
Izicelo zamarekhodi omphakathi ezifakwe yi-US Right to Know zahlanganisa izincwadi eziya noma ezivela kubaprofesa abasebenzela amanyuvesi akhokhelwa nguhulumeni kanye nezinkampani zezolimo ezifana neMonsanto, kanye nasezinkampanini ze-PR ezinjengoKetchum noma uFleishman Hillard, nokuya nokubuya kwezohwebo izinhlangano ezifana neGrocery Manufacturers Association kanye noMkhandlu Wolwazi Lwezinto Eziphilayo. Izicelo aziwona umzamo wokuthola noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu noma ucwaningo lwezemfundo olubandakanya osolwazi.
I-US Right to Know yinhlangano entsha yokudla engenzi nzuzo ephenya futhi ibike ukuthi yiziphi izinkampani zokudla ezingafuni sazi ngokudla kwethu. Ngeminye imininingwane, sicela ubheke iwebhusayithi yethu ku usrtk.org.
Siphinde sathumela izicelo ze-FOIA zokuthola izincwadi zosolwazi abasize umkhankaso we-No on 37 wokulwa nokubhalwa kokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo eCalifornia, kufaka phakathi:
(1) Uprofesa obhale i-op-ed lokho kucishe kufane nokubhalwa kwamagama kukaNo ezindaweni zokukhuluma ezingama-37; futhi,
(2) Osolwazi ababili ababhala iphepha elalithi “kwenziwe ngokuxhaswa okuyingxenye yezimali kusuka ku-No on 37, ”Futhi wakhululwa ezinyangeni ezimbili ngaphambi kosuku lokhetho.
Ngemininingwane engaphezulu mayelana nokukhohliswa okuningi kwe-No kumkhankaso we-37, bona, isibonelo:
* Amaqembu Angaphambili Aphikisana neProp 37: Izitha Zokuthembeka Kokubeka Amalebula njengamaPhoyisa Amanga kanye namaDemokhrasi ePhony Ekukhohliseni Abavoti
* Inkohliso ebhaliwe yeNombolo ku-37 Campaign